Demidov na Korolev, ndị nchọpụta Russia bụ Tom Rob Smith na William Ryan. | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Demidov na Korolev, ndị nchọpụta Russia bụ Tom Rob Smith na William Ryan.
Ugbu a ee. Ugbu a bụ oge mgbụsị akwụkwọ. Ifufe na-efe, okpomoku mechara daa ntakịrị mmiri zoo. Anyị enweghị snow na ice, ma ha ga-abata ma enwere m olileanya na ha ga-anọru afọ ahụ dum. Anyị ndị nwere obi ụtọ n'okpuru blanket, na ịchafụ na kọfị dị ọkụ, na-aga n'ihu na-akpo chi ndi oyi. Ka ọ dị ugbu a, anyị na-ejikwa n'echiche gaa ebe kachasị mma ịchọta ya. Ma ọ dịghị onye dị mma karịa oke Russia nke oke mpụ na ndị nyocha ndị ji nkà na amamihe dị ukwuu edozi ha.
Ọzọkwa, anyị nọ n'etiti narị afọ nke mgbanwe mgbanwe nke 1917. Mana anyị na onye ọrụ ọgụgụ isi Leo Demidov na onye isi ndị Ngalaba Nchọpụta Criminal nke Moscow, Alexei korolev, anyị na-aga obere oge mgbe e mesịrị: 30s na 50. Ndị kere ya, ndị edemede Tom Rob Smith na William RyanHa maara ka esi aga n'etiti aghụghọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị na-egbu ogugu na oyi, ezigbo oyi.
1 Tom ohi smith
Tom ohi smith
Tom ohi smith (1979) mụrụ na London ma bụrụ nwa nwoke Nne Sweden na nna Bekee. Ọ natara BA na Akwụkwọ ọgụgụ Bekee na Mahadum Cambridge. N'ihi a Ọzụzụ Harper ọ gara Pavia dị na Itali iji mụọ Creative Writing. Mgbe ọ laghachiri, ọ malitere ịrụ ọrụ dị ka onye edemede maka usoro telivishọn.
2008 bụ akwụkwọ mbụ ya na Smith e weere dị ka ihe itunanya edemede nke afọ. O meriri Ian Fleming Steel Dagger maka kacha mma Thriller nyere site na Ndị Ọdee Akwụkwọ Mpụ. Smith bụ onye ndụ nke onye agha Russia Andrei Chikatilo sitere n'ike mmụọ nsọ, nke n’agbata afọ 70 na 90 gburu mmadụ 52, ọtụtụ n’ime ha bụ ụmụaka.
E debere ya na Stalinist Russia na 1953. Na-akọ otu Leo Stepanovich Demidov, onye agha na-arụ ọrụ na ọgụgụ isi Soviet, ga-enyocha usoro igbu ọchụ. Nke a ga - eduga ya ịjụ banyere ụfọdụ enigmas nke oge nwata siri ike. Ọ bụ ezie na na mbụ ọ kwenyere na nzuzo na mgbasa ozi nke usoro ahụ, mgbe a manyere ya ka ọ ledoo nwunye nke ya maka ebubo ebubo aghụghọ, Demidov nwere nkụda mmụọ.
Su enweghị nkwekọrịtaN'agbanyeghị ihe ịchọ mma ya na ndekọ ndekọ amamịghe ya, eweda ya ala ma chụpụ ya na Moscow. Ejikọtara ya na ndị agha nke obodo mepere emepe, ọ ga-ahụ okwu ụfọdụ ogbugbu ụmụaka na-enyo enyo na ndị ọchịchị. Demidov ga-agba mbọ idozi ihe omimi ahụ n'onwe ya.
E nwetara ikike ikike ịkpọrọ ya gaa na fim Ridley Scott na na 2015 Onye nduzi Sweden bụ Daniel Espinosa duziri nhazi ya. Ha gụrụ kpakpando na ya Tom Hardy na Noomi Rapace ọ nwere ihe dị egwu dị ka Gary Oldman ma ọ bụ Charles Dance.
Site na 2009. Anyi no na ya 1956. Demidov alaghachila Moscow ma soro nwunye ya Raisa na ụmụ ha nwanyị Zoya na Elena biri. Mana ọdịnala ya na ọrụ ochie ya - dị ka ndị enyi na ezi na ụlọ nke ndị o jidere dịka onye ọrụ nchekwa steeti - gara n'ihu na-enye ya nsogbu. A usoro ohuru nke igbu mmadu ọ ga - eyi egwu ịkwụsịtụ nkwụsi ike ahụ. Ihe bụ ihe ọzọ, ndụ nke nwa ya nwanyị Zoya ga-etinye n'ihe egwu.
Onye ọrụ 6
Ọ bụ aha ikpeazụ n’usoro ahụ ma e bipụtara ya n’afọ 2011, mana ọ bụ naanị bekee. Ọ na-amalite ugbua na oge nke Agha Nzuzo. Raisa na ụmụ ya nwanyị abụọ gara njem mba United States na mba ọzọ, mana otu ọdachi na-atụghị anya ya bibie ihe niile Leo Demidov na Raisa wuru.
Ryan na-bụ Onye edemede Irish nke dabeere na London, ebe ọ rụrụ ọrụ ọtụtụ afọ dị ka ọkàiwu na City, na mgbakwunye na imekọ ihe site n'oge ruo n'oge maka telivishọn na ihe nkiri.
Bụ nke ya edemede edemede ya na usoro isiokwu a nke onye isi ndi Moscow Criminal Investigation Division, Aleksey Dimitrevich Korolev.
Ahụ nwa agbọghọ na-adịghị ndụ pụtara n’elu ebe ịchụ aja na-akụ afọ n’ala. E kenyere ikpe ahụ n'aka Captain Korolev, onye ga-achọpụta na onye ahụ metụtara bụ nwa amaala America. Na NKVD kpebiri itinye aka na Korolev na-agbaso nlezianya anya. Zọ ọ bụla na-adịghị mma nwere ike ime ka ị kwaga Siberia. Korolev ga-abanye na ifo Ndị Muscovites ịgwa ndị isi ha okwu mgbe ha na-enwe nrụgide site n'aka ndị isi ha ma na-eche onye ha ga-atụkwasị obi.
Uhie na-acha uhie uhie
Mgbe nyochachara gị na aha mbụ A na-achọ Korolev mma ma bụrụkwa ihe atụ nye ndị ọrụ Soviet niile. Ma ya ezi arụmọrụ na aga ikpe ka na-kpuchie n'ihi na ọ ga-abụrịrị ọzọ na nsochi nke ịga biri na Siberia. O ruo n’otu abalị, mmadụ akụọ aka n’ụzọ ya, ọ na-atụ ụjọ na ha achọpụtaghị ya. Kama, ọ na-achọpụta na Colonel Rodinov, nke NKVD, na-arịọ gị ka ị na-elekọta nyocha nke ahụ onye na-enyo onwe ya enyo nke otu nwa agbọghọ, Maria Alexandrovna Lenskaia, nwa amaala nlereanya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Black akwụkwọ » Demidov na Korolev, ndị nchọpụta Russia bụ Tom Rob Smith na William Ryan.
Anọ m na pdf El Niño 44 ruo ogologo oge, mana ewereghị m ya ka ọ bụrụ n'efu. Amaghim, eleghi anya aguru m ya
Ọ dị mma. Ana m akwado gị ya.
Zaghachi Mariola Díaz-Cano Arévalo
Nchịkọta nkenke nke ọrụ "La casa de Bernarda Alba" nke Federico García Lorca
Akwụkwọ 3 ị ga-agụ mgbe owu na-ama gị